You maara aha mbụ nke nnukwu akwụkwọ ndị a? | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
You maara aha mbụ nke nnukwu akwụkwọ ndị a?
Họrọ aha akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ akụkọ dị mkpirikpi nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ mgbe ụfọdụ, ọkachasị ma a bịa n'ịchịkọta echiche nke akwụkwọ a na, n'ezie, B TR AhịaL.
Ma ọ bụ ezie na taa anyị enweghị ike ịtụrụ ụfọdụ n'ime ọrụ ndị a kacha mara amara n’akwụkwọ n'okpuru aha ọzọ, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na anyị alaghachi n'ọnwa ndị bu ụzọ tupu mbipụta ya, ụfọdụ ndị edemede na ndị editọ ha dị iche iche hụrụ ya wee chọọ ịgbanwe aha ahụ eburu ụzọ rụọ maka ọrụ ahụ nke, na-ekpe ikpe site na nnabata nabatara, bụ nke ka mezie. Ma ọ bụ na ọ ga-aka mma?
La casa ọ ga-abụ ọrụ kasịnụ na akwụkwọ Hispaniki? Ikekwe Nwoke Ikpeazụ na Europe kasị ochie kpochapụwo na akwụkwọ ọgụgụ Orwell?
Kpebie onwe unu aha mbụ nke nnukwu akwụkwọ ndị ahụ nke, iji mee ka ọ nwekwuo obi ụtọ, ga-amalite ihe ọ bụla iji chọpụta ma ọ bụrụ na ịkọ nkọ aha tupu ịga n'ihu na akara ọzọ.
2 Nwoke ikpeazụ na Europe
3 Onye na-anwụbeghị anwụ
4 West Egg nzọ ụkwụ
6 Mmetụta mbụ
Nke a bụ aha mbụ echere iji mee ihe ga-eme baptizim ọrụ kasịnụ nke akwụkwọ Latin America, "Otu narị afọ nke owu ọmụma." Otú ọ dị, Gabriel García Márquez kpebiri ịgbanwe aha ahụ na nkeji ikpeazụ ka ọ wee Agaghị emepụta ọgba aghara na akwụkwọ akụkọ La casa grande, site na enyi ya Álvaro Cepeda Samudio, bipụtara na 1954.
Nwoke ikpeazụ na Europe
Mbipụta akwụkwọ n’afọ 1949 n’aha ya bụ “1984” nwere ihe nke aka ya, ọkachasị n’oge ụmụ mmadụ na-eleghị anya n’ihu n’atụghị egwu dịka anyị na-eme taa (ma ọ bụ ikekwe ọ bụghị nke ukwuu). Aha ọma nke onye nkwusa George Orwell kpebiri iji mee ihe na nkeji ikpeazụ mgbe ọ tụlesịrị Nwoke Ikpeazụ na Europe, na-arụ ọrụ aha, dị ka azụmahịa dị egwu.
Onye na-anwụbeghị anwụ
Ihe a doro anya na o siri ike ịkọ nkọ, ka anyị hụ: Frankesntein, Dracula, Ajụjụ ọnụ nke Vampire, Dracula ọzọ. . . ee, Dracula! N'ụzọ dị mwute, Bram Stocker maara otú e si ahọrọ aha kwesịrị ekwesị n'oge maka ihe ga-abụ njirimara kachasị akara na akwụkwọ egwu.
West Egg nzọ ụkwụ
Aha a, yana Trimalción na West Egg, N'etiti ikpo ntụ na nde millionaires ma ọ bụ N'okpuru uhie, ọcha na acha anụnụ anụnụ bụ ndị chọrọ ime baptizim nnukwu ọrụ nke F. Scott Fitzgerald "The Great Gatsby". Maka ndị na-agụbeghị akwụkwọ ahụ, West Egg bụ akụkọ agbataobi ama ama ebe nkata ahụ mere.
O siri ike ịkọ nkọ aha ọrụ nke egwu Harper Lee bụ "Iji gbuo Mockingbird", akwụkwọ akụkọ edere aha ikpeazụ ya mgbe Lee jụrụ ilekwasị anya na otu agwa.
Agbanyeghi na anyi achoghi "Mpako na Akuko" Jane Austen ọ kpoputara aha a na - agaghị aga nke ọma maka ihe ga - abụ ọrụ ya kasịnụ.
Offọdụ n'ime aha mbụ nke nnukwu akwụkwọ ndị ahụ na anyị niile maara taa abụghị ndị hiere ụzọ dị ka mmadụ nwere ike ịtụ anya (Ndị nwụrụ anwụ nwụrụ anwụ, n'ezie). Agbanyeghị, hụ na omume, hụ n'anya, Otu narị afọ nke ịnọrọ onwe onye ma ọ bụ Dracula yiri ka anyị aha ndị na-akọ akụkọ ifo na anyị enweghị ike iji dochie ha ndị ọzọ.
Ì chere na ndị edemede a mere mkpebi kwesịrị ekwesị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » You maara aha mbụ nke nnukwu akwụkwọ ndị a?
Maria Ophelia dijo
Echere m na ha niile dị mma. Ezigbo ozi.
Zaghachi Maria Ofelia
Alexander Knight Salas dijo
Otu narị afọ nke ịnọ naanị ya abụghị akwụkwọ ọgụgụ Latin America kachasị ukwuu, ọ bụ naanị ya kacha mara.
Zaghachi Alejandro Caballero Salas
Goodreads, netwọkụ mmekọrịta maka ọtụtụ ndị na-agụ